Mustaqbalka Iibka B2B: Isku Darka Gudaha & Dibadda Kooxaha | Martech Zone
Mustaqbalka Iibka B2B: Isku Darka Gudaha & Dibedda Kooxaha
Monday, August 10, 2020 Monday, August 10, 2020 Lindsay Duran
Cudurka faafa ee 'COVID-19' wuxuu kiciyay raadad cakiran oo ku baahsan dhammaan muuqaalka B2B, laga yaabee inuu si aad ah ugu weynaaday sida macaamilku u dhacayo. Xaqiiqdii, saameynta wax iibsigu wuxuu ahaa mid aad u weyn, laakiin ka warran ganacsiga ganacsiga?
Sida laga soo xigtay Warbixinta Dukaameysiga B2B Mustaqbalka 2020, kaliya 20% macaamiisha ayaa si toos ah uga iibsada iibka wakiilada, hoos uga dhacay 56% sanadkii kahoreeyay. Xaqiiqdii, saameynta Ganacsiga Amazon waa mid muhiim ah, laakiin 45% jawaabeyaasha sahanka ayaa soo sheegay in iibsashada khadka tooska ah ay ka dhib badan tahay khadka tooska ah.
Tani waxay muujineysaa in kanaalka iibka dhaqameed nirvana ee kooxaha iibka gudaha iyo dibaddaba si weyn loo carqaladeeyay. Ecommerce hadda waa kanaal lama huraan ah oo leh shirkadaha tartamaya si ay ugu fududaato macaamiisha inay wax kaga iibsadaan khadka tooska ah, gudaha kooxaha iibka ayaa si dhaqso leh loogu hagaajiyay inay shaqadooda ka qabtaan guriga, laamaha iyo dukaanada ayaa sii furey haddii loo arko inay muhiim yihiin. Kuwa iibinta goobta waxay sameeyeen intii karaankooda ahayd inay si dhakhso leh u hagaajiyaan shaqooyinkoodii caadiga ahaa ee duulimaadka si ay u helaan macaamiishooda iyaga oo aan awood ugu yeerin iyaga shaqsi ahaan.
Ku dhowaad 90% iibka ayaa u dhaqaaqay qaab wadahadal fiidiyoow ah / taleefan / websaydh iib ah ah, in kasta oo shakiga qaar weli taagan yahay, in ka badan kala badh ayaa aaminsan in tani ay la mid tahay ama ka waxtar badan tahay noocyada iibka ee la adeegsaday ka hor COVID-19.
McKinsey, B2B barta u dhexgalka dhijitaalka: Sidee iibku isu beddelay intii lagu jiray COVID-19
Mustaqbalka muuqaalka iibku si dhakhso leh ayuu ugu wareegey culeyska khalkhalka, laakiin hoggaamiyeyaasha ganacsiga ee xariifnimada ahi waxay la jaanqaadayaan tallaabo-qaadasho, iyagoo adeegsanaya falanqaynta iibka ee saadaalinta ah inay ku dhex milmaan iibka gudaha iyo dibedda oo ay si fiican ugu adeegaan macaamiil kasta.
Fursad Aan La Fududeynin Oo Dhex Dheer Xisaabaadka Macaamiisha
Shirkadda B2B gudaheeda, 20% saldhigga macaamiisha ayaa caadi ahaan kujira xisaab istiraatiiji ah qaybta - iyo sabab wanaagsan.
Maaha wax aan caadi ahayn in 80% dakhliga laga soo saaro heerka ugu sarreeya xisaabaadka. Xaq, saxeexyada iibka ee aqoonta ugu badan leh ayaa loo magacaabay ilaalinta iyo kobcinta xidhiidhadaas.
Waqti ka dib, iyada oo loo marayo badinta khadka wax soo saarka ama isku darka iyo soo iibsiga, shirkaduhu waxay ku kaceen heer aad u adag oo isla mar ahaantaana weydiisanaya wakiilada iibka si ay u daboolaan xisaab badan inta ay aqbalayaan taas, iyada oo sidaas la samaynayo, tiro aad u tiro badan oo macaamiisha ah ayaan helin feejignaanta gaarka ah ee loo baahan yahay dayactirka iyo kobcinta saamiga jeebka. Si kastaba ha noqotee, marka la eego khalkhalka COVID-19, waxay ku habboon tahay su'aasha: Imisa dakhli ayaa kaaga maqan dabada dheer?
Natiijooyinka ka yimid warbixinta heerka caalamiga ah waxay tilmaamaysaa in wadarta fursadaha la heli karo ee awood u siinta wakiillada iibka inay hayaan oo ay koraan koontooyinkaaga dhexdooda hadda jira saldhigga macaamiisha waa muhiim. Marka la eego labadaba macaamiisha iyo iibinta, shirkadaha B2B waxay ku guuldareystaan ​​inay qabtaan meel kasta oo ka jirta 7% ilaa 30% dakhliga la heli karo.
Soo Degso Warbixinta Global Benchmark
Mustaqbalka Iibka B2B: Isku Darka Iibinta Gudaha iyo Dibadda
Sida lagu xusay warbixinta McKinsey, dibedda ama iibka iibka duurka ayaa u shaqeynaya sida kuwa gudaha ee iibka ah. Waqtiga la badbaadiyey ee socdaalka iyo booqashada akoonadooda sare waxay soo bandhigeysaa fursad cusub, oo dib loogu soo xasuusto kooxdan iibka ee xirfadda sare leh: U rogo qaabkooda iibka cad-galka dhanka dabo dheer ee xisaabaadka macaamiisha isla markaana ku dhiirrigeliya inay macaamiil kasta ula macaamilaan sida koonto istiraatiiji ah.
Dambadan dheer ee xisaabaadka macaamiisha, oo mararka qaarkood loo yaqaan akoonnada guryaha ee qaybinta, ayaa sida caadiga ah la siiyaa markii ay booqanayaan laan ama ay soo wacayaan markay wax u baahdaan. Ka faa'iideyso ballaadhinta cusub ee la heli karo ee kooxaha iibka ka baxsan adoo siinaya iyaga talaabooyin koritaan iyo soo kabasho ah si ay ula qaataan macaamiishan. Falanqaynta iibinta ee saadaashu waxay si dhakhso leh ugu baahin kartaa aragtiyadan miisaanka, xisaabinta dhammaan macaamiisha iyo qaybaha wax soo saarka.
Falanqaynta iibinta ee saadaalinta ah wuxuu abuuraa ficilo kobcitaan leh sayniska xogta horumarsan si loo abuuro astaamo qaab iibsi ku habboon oo ku saleysan macaamiisha ugu fiican shirkadda, iyadoo la tixgelinayo qaababka kharash garaynta, wadarta qarashka, iyo ballaca alaabada la soo iibsaday Isticmaalidda algorithms-ku-xirnaanta iyo isir ahaanta ku saleysan, waxay u dhigantaa macaamil kasta qaabka ugu dhow ee wax iibsiga si loogu hago dib-u-eegis toos ah waxyaabaha macaamiisha aysan hadda iibsanayn… laakiin waa inay ahaataa.
Waxay sidoo kale banaanka soo dhigtaa ficilada soo kabashada iyadoo la aqoonsanayo macaamiisha "halista ku jirta" ee muujinaya astaamaha goosashada ee hal ama in kabadan oo alaabooyin ah iyadoo la adeegsanayo algorithms horumarsan, si loogu adeego aagag gaar ah oo dakhligu hoos u dhacayo ama gebi ahaanba lumay. Ka soo horjeedka warbixinta sirdoonka ganacsiga dhaqameed, qaabkani wuxuu tirtirayaa buuqa iyadoo lagu xisaabtamayo qaababka wareegga iibsiga, xilliyada, iibsashada hal-mar, ama dabeecadda wax iibsiga ee isbeddelka leh, si looga reebo fikradaha beenta ah ee aragtida soo-kabashada.
Falanqaynta iibinta ee saadaasha ah ayaa durba si ballaadhan loogu adeegsadaa shirkadaha B2B oo leh xawaare sare iyo dib-u-buuxin, qaybinta adeegga cuntada. Haddii aad haysato falanqeyn iib ah oo saadaalin ah maanta, mudnaanta koowaad siiya aragtiyadan guud ahaan dabo dheer ee xisaabaadka iibka dibedda way fududahay in la sameeyo. Haddii aadan weli ku haysan falanqaynta iibka ee saadaalinta ah, bilowgu waa mid toos ah oo wuxuu ku noolaan karaa meheraddaada ugu yaraan afar toddobaad.
Tags: b2bFayruuska coronaCOVID-19gudaha iibkaxirmooyinkadibedda iibkaiibinta telefoonkafalanqaynta iibka saadaalintakanaalka iibkaxisaabaadka istaraatiijiga ahvideoconferencingiibinta webkadhalaalaya
Lindsay Duran waa sarkaalka madaxa suuqgeynta ee shirkadda Zilliant, halkaas oo ay iyadu mas'uul ka tahay dardargelinta istiraatiijiyadda koritaanka, soo saarista dalabka, suuqgeynta wax soo saarka, isgaarsiinta shirkadaha, kaalmaynta iibka, iyo dejinta suuqa. Halyeeyga iibka iyo suuqgeynta, Duran wuxuu si toos ah ula shaqeeyay shirkadaha B2B si loo aqoonsado loona xaliyo qiimaha gaarka ah, iibka, iyo caqabadaha dakhliga.